Ma tahay shaqo iyo waxbarasho doon: Fursadan ka faa´iideyso - NorSom News
Ma tahay shaqo iyo waxbarasho doon: Fursadan ka faa´iideyso
Iskuulka dadka ka shaqeeya ilaalinta xabsiyada, ayaa qaadanayo ardeyda sanad dugsiyeedka cusub ee 2018-2019. Hadii aad tahay shaqo doon ama aad ogtahay qof kale oo soomaali ah oo fursadan ka faa´iideysan kara, fadlan la wadaag.
Vil du bli fengselsbetjent?:Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2018-2019. (Halkan riix ama click sii).
Previous articleVenstre oo ay u badantahay inay dowlad la dhistaan Frp iyo Høyre.
Next articleWaa kuwan 169-ka xildhibaan ee ku guuleystay kamid noqoshada baarlamaanka Norway
sxb waxan ahay shaqo doon shaqadas na wan qabankaraa xirfad ayana u leyhay
waxan ahay shaqo doon shaqadas na wan qaban karaa wayo xirfad ayan u leyahay inan qabto shaqoyinkas
waxan ahay shaqo doon shaqadas na xirfad ayan u leyahy wana qaban karaaa